iOS 11 ichiri pazasi peIOS 10 panguva imwechete yenguva | IPhone nhau
iOS 11 ichiri pazasi peIOS 10 panguva imwecheteyo yenguva
Sezvo yekutanga manhamba ekugashira eApple yazvino nhare yekushandisa sisitimu yakaonekwa, isu nguva nenguva takakuzivisa nezve kugamuchirwa kweIOS 11, kugamuchirwa uko kwagara kuchisara kumashure kweshanduro yapfuura yeIOS. Chimwe chezvikonzero zvekutora kunonoka kwave kuri kudzikira mumidziyo yekare, kudzikira kwakazobvumidzwa neApple zviri pamutemo uye iro rave dambudziko rakakomba remufananidzo kukambani uye iro rakasungirwa kupa chirongwa chekutsiva bhatiri kune ese ma terminals ekare. pamusoro pekutendera wekupedzisira mushandisi, kuburikidza neyekuvandudza, kukwanisa kusarudza kana iwe uchida kuti kifaa chako chiite zvizere kana kuwedzera hupenyu hwebhatiri, kana isiri mumamiriro akakwana.
Apple yakagadzirisa iyo iOS 11 yekugamuchira dhata mune yekuvandudza portal, uye kwatingaone kubva muna Ndira 18, iOS 11 yakaiswa pane 65% yemidziyo yakatsigirwaIpo iOS 10, iyo vhezheni yapfuura, ichiri kuwanikwa pa28% yemidziyo yakatsigirwa. Vamwe vese, 7%, vane vhezheni pamberi peIOS 10.
Kana isu tichifananidza idzi data neidzo dzegore rapfuura panguva imwe cheteTinogona sezvo iOS 10 yaive ne76% mugove muna Ndira 6 wegore rapfuura. Kana tikadzokera kumashure munguva, iOS 9 yaive pakupera kwaNdira pa76% yemidziyo, iOS 8 pa68%, nepo iOS 7 pamisi imwechete pane 80% yemidziyo yakatsigirwa.
Nyaradzo chete Apple yasara, ndeyekuti yazvino vhezheni yeIOS 11 yakabatana inodarika huwandu hweshanduro dzekupedzisira nhatu dzeAroid zvakabatana. Zvichida, sezvo chirongwa chekutsiva bhatiri chichiita chakadzikama uye pasina kushomeka kwebhatiri, chikamu ichi chichawedzera, asi zvese zvakanangana neIOS 11 ine mwero wakaipisisa wekutorwa kweIOS mumakore achangopfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 ichiri pazasi peIOS 10 panguva imwecheteyo yenguva
Disney inowana aimbove maneja weTunes kune yayo yemberi yekuparadzira chikuva
TouchRetouch inobvisa nyore chero chinhu mumifananidzo yako